Goolhaye Claudio Bravo Oo Sharaxay Sababtii Uu Uga Soo Tagey kooxda Barcelona | Rajomedia
Goolhaye Claudio Bravo Oo Sharaxay Sababtii Uu Uga Soo Tagey kooxda Barcelona
Goolhaye cusub ee kooxda Man City Claudio Bravo ayaa wuxuu daboolka ka qaaday sababtii ka danbeysay inuu kasoo baxo kooxdiisii hore ee Barcelona, inta uu furnaa suuqii kala iibsiga.
Claudio Bravo ayaa wuxuu tilmaamay in Barcelona ay ka door bitay isaga goolhaayaha reer germnay ee Ter Stegen, wuxuuna sheegay inuusan diyaar u ahayn inuu kasoo muuqdo gursiga keydka, sidaa darteed uu doortay u soo dhaqaaqista kooxda Man City.
Claudio Bravo oo ka hadlayay sabatii keentay inuu yimaado dalka Egland ayaa wuxuu yiri: “Go’aanku ma ahayn mid ku jiray gacanteyda, Barcelona waxay u muuqatay inay dooneysay Ter Stegen, aniguna raali kama ahayn inaan kasoo muuqdo kursiga keydka, sababtoo ah waan ka war qabay wax walba oo ka socday gudaha Barcelona”.
Claudio Bravo ayaa xusid mudan inuu soo caga dhigtay kooxda Man City Maalmihii ugu danbeeyay ee suuqii lasoo dhaafay, wuxuuna kaga soo dhaqaaqay kooxda reer Spain ee Barcelona.
Dhinaca kale wararka ayaa waxay intaa ku sii darayaan in kooxda Barcelona ay go’aansatay xiligaas inay iska fasaxdo Claudio Bravo si ay u sii heysato Ter Stegen oo isagu ay u arkeen in mustaqbal wanaagsan uu ku leeyahay